Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (2) | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ukuphila kwesintu kunqunywa ngokulandelana nomzimba wobuntu womphefumulo. Ngamanye amazwi, umuntu ngamunye uthola ukuphila njengomuntu wenyama ngokulandelana nomzimba wobuntu womphefumulo wabo. Ngemva kokuzalwa komzimba womuntu, lokho kuphila kuyaqhubeka kuze kufinyelele eqophelweni eliphezulu lenyama, okuwukuthi, esikhathini sokugcina lapho umphefumule ushiya khona indlu yawo. Le nqubo iyaziphindaphinda ngomphefumulo womuntu ofikayo nophumayo, kanye nofikayo nohambayo, kanjalo ugcine ukuphila kwaso isintu. Impilo yomzimba futhi iyimpilo yomphefumulo womuntu, futhi umphefumulo womuntu usekela ukuba khona komzimba womuntu. Okungukuthi, ukuphila komuntu ngamunye kuvela emphefumlweni wakhe; akuwona umzimba wakhe owokuqala ukuba nokuphila. Ngakho, imvelo yomuntu ivela emphefumlweni wabo, hhayi emzimbeni yabo. Ngumphefumulo womuntu ngamunye kuphela owazi indlela oye walingwa, wahlushwa, futhi wonakaliswa ngayo uSathane. Umzimba womuntu ngeke ukwazi lokhu. Ngakho, isintu ngokungaqondile siya ngokwengeziwe siba nokungcola, nobubi nokuba sebumnyameni, ngesikhathi igebe phakathi Kwami nomuntu liya likhula, nezinsuku zesintu ziya ngokwengeziwe nokuba mnyama. Imiphefumulo yesintu yonke ingalawulwa uSathane. Ngakho, kusobala ukuthi umzimba womuntu futhi ulawulwa uSathane. Kungenzeka kanjani ukuthi inyama enjalo kanye nabantu abanjalo bangamelani noNkulunkulu futhi ngokofuzo bahambisane Naye? Isizathu esenza uSathane waphonswa phansi Yimi emoyeni kungenxa yakungikhaphela, ngakho iyiphi indlela abantu abangazikhulula ngayo emiphumeleni yalokhu? Yilesi isizathu esenza imvelo yomuntu ibe ukukhaphela. Ngethemba ukuthi uma seniqonda lesi sizathu nizoba futhi nokukholelwa ebuntwini bukaKristu. Umzimba owembethwe uMoya kaNkulunkulu umzimba kaNkulunkulu. UMoya kaNkulunkulu uphakeme; unguSomandla, ungcwele, futhi ulungile. Ngokufanayo, umzimba Wakhe nawo uphakeme, uSomandla, ungcwele, futhi ulungile. Umzimba onjalo kuphela okwazi ukwenza okulungile nokuzuzisa isintu, lokho okungcwele, okukhazimulayo nokunamandla, futhi awukwazi ukwenza noma yini emelene neqiniso noma izimiso zokulunga nobulungisa, ingasaphathwa eyokwenza noma yini ekhaphela uMoya kaNkulunkulu. UMoya kaNkulunkulu ungcwele, futhi ngaleyo ndlela nomzimba Wakhe awonakaliswa uSathane; umzimba Wakhe unobuntu obehlukile kunomzimba womuntu. Ngoba umuntu, hhayi uNkulunkulu, owonaliswa uSathane; uSathane ngeke akwazi ukonakalisa umzimba kaNkulunkulu. Ngakho, nakuba umuntu kanye noKristu bahlala endaweni efanayo, umuntu kuphela ongenwa, asetshenziswe, futhi abanjwe uSathane. Ngokuphambene, uKristu ongangenwa naphakade ukonakala kukaSathane, ngoba uSathane angeke aze akwazi ukukhuphukela endaweni yophezu konke, futhi ngeke aze akwazi ukusondela kuNkulunkulu. Namuhla, kufanele nonke niqonde ukuthi yisintu kuphela, esiye sonakaliswa uSathane, esingikhaphelayo, nokuthi le nkinga izohlala njalo ingahlobene noKristu.
Yonke imiphefumulo eyonakaliswe uSathane ingaphansi kokulawulwa umbuso kaSathane. Yilabo abakholelwa kuKristu kuphela abaye bahlukaniswa, basindiswa ekamu likaSathane, futhi balethwa embusweni wanamuhla. Laba bantu abangasaphili ngaphansi kwethonya likaSathane. Noma kunjalo, imvelo yomuntu isagxile emzimbeni womuntu. Okungukuthi ngisho noma imiphefumulo yenu isindisiwe, imvelo yenu isenokubonakala kwayo okudala nethuba lokuthi nizongikhaphela lisekhona ngokugcwele ngaphandle kokungabaza. Kungakho umsebenzi Wami uqhubeka njalo, ngoba imvelo yenu igxile kakhulu. Manje nonke nihlupheka kakhulu ngangokunokwenzeka ekufezeni imisebenzi yenu, kodwa iqiniso elingenakuphikwa yileli: Ngamunye wenu angakwazi ukungikhaphela futhi abuyele embusweni kaSathane, ekamu lakhe, futhi aphindele ekuphileni kwenu okudala. Ngaleso sikhathi ngeke kwenzeke ukuba nibe nobuncane ubuntu noma ukubukeka komuntu njengoba ninjalo manje. Ezimweni ezibucayi, nizobhujiswa futhi ngaphezu kwalokho nibhujiswe phakade, ningaphinde nishintshele emzimbeni womuntu kodwa nijeziswe kanzima. Lena yinkinga engaphambi kwenu. Nginikhumbuza ngale ndlela ukuze kuthi okokuqala, umsebenzi Wami ungabi yize, futhi okwesibili, ukuze nonke niphile ezinsukwini zokukhanya. Eqinisweni, ukuthi umsebenzi Wami uyize lokho akuyona inkinga enkulu. Okubalulekile ukuthi nikwazi ukuba nokuphila okujabulisayo kanye nekusasa elimangalisayo. Umsebenzi Wami ngumsebenzi wokusindisa imiphefumulo yabantu. Uma umphefumulo wakho uwela ezandleni zikaSathane, khona-ke umzimba wakho ngeke ube nenkathi yokuthula. Uma ngivikela umzimba wakho, khona-ke umphefumula wakho ngokuqinisekile uzoba ngaphansi kokunakekelwa Yimi. Uma ngikwenyanya nempela, khona-ke umzimba kanye nomphefumulo wakho uzowela masinyane ezandleni zikaSathane. Ungacabanga ukuthi isimo sakho siyoba njani ngaleso sikhathi? Uma ngolunye usuku amazwi Ami elahleka kini, khona-ke ngizoninikela ngokuphelele kuSathane ukuze nihlushwe ngokuphindiwe kuze kube yilapho intukuthelo Yami isiphele ngokuphelele, noma ngizonijezisa mina uqobo nina bantu abangenakuthethelelwa, ngoba izihliziyo zenu zokungikhaphela azishintshile.
Manje kufanele nonke nizihlole ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze nibone ukuthi kungakanani ukwakheka kwenu okusangikhaphela. Ngiphelelwa yisineke sokulinda impendulo yenu. Ningangizibi. Angidlali ngabantu. Engikushoyo khona-ke ngizokwenza. Ngethemba ukuthi nonke nizowathatha njengabalulekile amazwi Ami futhi ningacabangi ukuthi amane ayinoveli nje yezindaba eziqanjiwe zesayensi. Engikufunayo kini yisinyathelo esiwujuqu, hhayi enikucabangayo. Okulandelayo, kufanele niphendule le mibuzo evela Kimi: 1. Uma ngempela ungumenzi womsebenzi, ingabe ungangisebenzela ngokwethembeka, ngaphandle kwanoma yikuphi ukugcina icala noma izici ezimbi? 2. Uma uthola ukuthi angikuhloniphi, ingabe uyoqhubeka uhlale futhi ungisebenzele ukuphila kwakho konke? 3. Uma uzikhandle kakhulu kodwa selokhu ngingakuthandi, uzokwazi yini ukuqhubeka usebenzela Mina ungaziwa? 4. Uma, ngemva kokuthi uchithe ezinto ezithile Ngami, ngingazange ngenelise izimfuneko zakho ezincane, ingabe uzophela amandla futhi udumazeke Ngami noma uzothukuthela futhi ungithuke? 5. Uma kade selokhu wethembeke kakhulu futhi ungithanda, kodwa uhlushwa ukugula, ukuphundleka kokuphila, kanye nokushiywa abangane nezihlobo zakho noma ukukhuthazelela noma yiziphi ezinye izinhlekelele ekuphileni, ingabe ukwethembeka kwakho kanye nothando lwakho Ngami kusazoqhubeka? 6. Uma kungekho nokukodwa kwalokho oke wakucabanga enhliziyweni yakho okuqondana nalokho engikwenzile, khona-ke uzoyihamba kanjani indlela yakho yesikhathi ezayo? 7. Uma ungatholi lutho obulindele ukuthi uzokuthola, ingabe uzoqhubeka ube umlandeli Wami? 8. Uma ungakaze uqonde injongo kanye nokubaluleka komsebenzi Wami, ingabe uzoba umuntu olalelayo ongenzi ukwahlulela kanye neziphetho ezingenakho ukucabangela? 9. Ingabe uzowazisa onke amazwi engiwashilo kanye nawo wonke umsebenzi engiwenzile ngesikhathi ngikanye nesintu? 10. Ingabe uzokwazi ukuba umlandeli Wami othembekile, ozimisele ukungihluphekela ukuphila kwakhe konke noma ungeke uthole lutho? 11. Ingabe uzokwazi ukungacabangi, ukungahleli, noma ukungazilungiseleli indlela yakho yokuphila esikhathini esizayo ngenxa Yami? Le mibuzo iyizimfuneko Zami zokugcina kini, futhi ngethemba ukuthi nonke nizongiphendula. Uma ufeza okukodwa noma okubili kwezinto ezikule mibuzo, khona-ke kusadingeka uqhubeke nokusebenza kanzima. Uma ungeke ufeze nokukodwa kwalezi zimfuneko, khona-ke ngempela uwuhlobo oluzophonswa esihogweni. Angidingi ukusho okwengeziwe kubantu abanjalo. Lokhu kungenxa yokuthi empeleni ababona abantu abangaba nokuvumelana Nami. Ngingagcina kanjani ekhaya Lami umuntu ongangikhaphela ngaphansi kwanoma yisiphi isimo? Kulabo abangaqhubeka nokungikhaphela ngaphansi kwezimo eziningi, ngizobheka ukwenza kwabo ngaphambi kokuthi ngenze amanye amalungiselelo. Nokho, uma nje bengabantu abangakwazi ukungikhaphela, kungakhathaliseki ukuthi kungaphansi kwaziphi izimo, ngeke ngikhohlwe futhi ngizobakhumbula enhliziyweni Yami ngesikhathi ngisalinde ithuba lokuphindisela ngezenzo zabo ezimbi. Izimfuneko ezingiphakamisile zonke ziyizindaba okufanele nizihlole ngazo. Ngethemba ukuthi nonke nizozithatha njengezibalulekile nokuthi ngeke nisebenzelane Nami sakugcina icala. Esikhathini esingekude esizayo, ngizohlola izimpendulo eninginike zona ngiziqhathanise nezimfuneko Zami. Ngaleso sikhathi, ngeke ngidinge okunye kini futhi ngeke ngisaninikeza isiyalo esiqotho. Kunalokho, ngizosebenzisa igunya Lami. Laba okufanele bagcinwe bazogcinwa, labo okuzodingeke bavuze bazovuza, labo okuzodingeka banikelwe kuSathane bazonikelwa kuSathane, labo okuzodingeka bathole isahlulelo esinzima bazothola isahlulelo esinzima, kanti labo okuzodingeka baqedwe bazobhujiswa. Ngaleyo ndlela, ngeke kusaba khona umuntu ozongiphazamisa ezinsukwini Zami. Ingabe uyawakholelwa amazwi Ami? Ingabe uyakholelwa empindiselweni? Ingabe uyakholelwa ekutheni ngizojezisa bonke ababi abangikhohlisayo nabangikhaphelayo? Ingabe ulangazelela lolo suku ukuba lufike ngokushesha noma ukuba lwephuze ukufika? Ingabe ungumuntu owesaba kakhulu isijeziso, noma ungumuntu ongakhetha ukumelana Nami ngisho noma kuzodingeka ubhekane nesijeziso? Lapho lolo suku lufika, ingabe uzibona uphila phakathi kwabenamayo nabahlekayo, noma abakhalayo nabagedlisa amazinyo? Luhlobo luni lwesiphetho owethemba ukuthi uzoba naso? Ingabe uke wakucabangela ngokujulile yini ukuthi ungikholelwa ngokugcwele noma ungingabaza ngokugcwele? Ingabe uke wakucabangela ngokucophelela ukuthi luhlobo luni lwemiphumela kanye nesiphetho izenzo nokuziphatha kwakho okuyokulethela khona? Ingabe wethemba ngempela ukuthi onke amazwi Ami azogcwaliseka ngalinye, noma uyesaba ukuthi amazwi Ami azogcwaliseka ngalinye? Uma wethemba ukuthi ngihamba ngokushesha ukuze ngizogcwalisa amazwi Ami, khona-ke kufanele uwabheke kanjani amazwi kanye nezenzo zakho? Uma ungethembi ukuthi ngizohamba futhi ungethembi ukuthi amazwi Ami onke azogcwaliseka ngokushesha, khona-ke kungani ukholelwa Kimi manje? Ingabe wazi ngempela ukuthi kungani ulandela Mina? Uma kuwukuthi kumane kuwukwandisa amathuba akho, khona-ke akudingeki ukuba ubhekane nalezi zinkinga. Uma kuwukuthi ungabusiswa futhi ukwazi ukuphunyula enhlekeleleni ezayo, khona-ke kungani ungakhathazeki ngokuziphatha kwakho? Kungani ungazibuzi ukuthi ungakwazi yini ukwanelisa izimfuneko Zami? Kungani futhi ungazibuzi ukuthi uyafaneleka yini ukuba uthole izibusiso Zami zesikhathi esizayo?